တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ပန်းတပွင့်တောင်သို့ …
ပုံတွေ ကြည့်ပြီး ရောက်ဖူးချင်စိတ်လည်း တဖွားဖွားပေါ်တယ်...
ပန်းတပွင့်တောင်တဲ့လား။ နာမည်က ဆန်းတယ်နော်။ အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာ ၀မ်းသာကြည်နူးရပါတယ်ဗျာ။
i call THARDU3times. ijust know another monastic school for poor childern.by the way, why people can not eat " MEAT ' there? if u dont' mine
မမေ မှော်ဘီသွားတာ ရေးစရာ တခုရလာတယ်ပေါ့..။ :)
ကျနော်တခု စဉ်းစားမိတယ်။ ဟိုးတခါလည်း ဂျစ်တူးက သူမြန်မာပြည်မှာ ခရီးသွားရတော့ ပုံလေးတွေနဲ့ အတူ ဆောင်းပါးရေးတယ်။ အခု မမေလဲ မှော်ဘီရောက်တဲ့အခိုက် ပုံလေးတွေနဲ့ စာတွဲတင်တယ်။ တခြားသော တချို့တွေလဲ တင်တာ တွေ့မိတယ်။ အဲလိုပဲ တခြားသော ကျနော်တို့ ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေများလည်း (ကင်မရာပါခဲ့တဲ့အခိုက်ပေါ့) ရောက်တဲ့ အရပ်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်လို့ ပို့စ်လေးတွေ တင်ပေးရင် ဘလော့ဂ်တွေ လိုက်လည်တာက ကမ္ဘာအနှံ့က ပုံလေးတွေနဲ့ အဲဒီကို ရောက်နေကြသူတွေရဲ့ ကိုယ်စီအတွေးခံစားချက်တွေကို သူတို့နဲ့အတူတူ ခံစားမှာပဲ ဆိုတဲ့ စဉ်းစားချက်ပါ။
မမေရဲ့ ကုသိုလ်အဖို့ဘာဂကို သာဓုခေါ်ပါတယ်။
5/30/2007 1:21 AM
သာဓု.. သာဓု.. သာဓု.. ပါခင်ဗျာ..
5/31/2007 4:56 AM
အစ်မရေ..၊ဘုန်းဘုန်း အရှင်ဆေကိန္ဒ ရဲ့ ဓမ္မဒူတကျောင်း နဲ့ များ နီး မ လား လို့ မေး ချင် လို့ ပါ..။
6/01/2007 9:58 PM
ညီမလေး sowha1 … သွားချင်ရင် မမေ လိုက်ပို့ပေးပါမယ်။
ghost07 .. သက်သတ်လွတ်စားခြင်းဖြင့် အဲဒီဒေသတ၀ိုက်က သတ္တ၀ါတွေကို ဇီဝိတဒါန ပြုရာ ရောက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာတော်အနေနဲ့ သတ္တ၀ါတွေကို မေတ္တာပွားနေတာမို့ သူကိုယ်တိုင်နဲ့တကွ ကျောင်းကို လာရောက်သူ၊ နေထိုင်သူ အားလုံး သက်သတ်လွတ်စားစေတာ လို့ ကျမကတော့ ထင်တာပါပဲ။
AZURE … အရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ ဓမ္မဒူတကျောင်းက နေဆက်ဝင်သွားရပါသေးတယ်။ နာရီဝက်လောက် ဆက်သွားရမယ် မှတ်တယ်။ ပန်းတပွင့်တောင်က အတွင်းပိုင်း တော်တော်ကျပါတယ်။ အရင်က အဲဒီနေရာမှာ စစ်သားတွေ လက်နက်နဲ့လေ့ကျင့်တဲ့ နေရာလို့ ဆရာတော် အမိန့်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
6/02/2007 6:31 AM
သာဓုလဲ ခေါ်ပါတယ် မေးထားတဲ့ ကွန့်မန့် တွေကို ဖြေပေးထားတာလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လာလည်ဖြစ်ပေမဲ့ ဆီဗုံးမရှိတော့ ခုမှပဲ ကွန့် မန့် ထဲ ၀င်ရေးဖြစ်တာပါ။
ဒီနေ့ ၁၆.၉.၂၀၁၃ ဆရာတော်ကိုဖူးမြော်ရမယ်တဲ့။ဝမ်းသာလိုက်တာ။ဆရာတော်က ရေနီ ကြွမှာပါ။ရွေကြာပင် ရပ်ကွက်ထဲကအစ်ကိုတစ်ယောက် အိမ်မှာ နေ့ဆွမ်းဘုန်းပေးမယ်ဆိုလို့သွားဖူးမှာပါ။
9/16/2013 3:20 AM